Ramadaan Axkaam & Eedaab Q3aad (Hussein Jama Guudcade)
Monday May 13, 2019 - 09:05:22 in Maqaallo by Wariye Tiriko
6: Fadliga Bisha Ramadaanta.
Fadaa’isha bishan barakaysan lama soo koobi karo waxaanse ku soo ururin doonaa 8 fadli oo aad u waawayn inay leedahay bishan Ramadaan waxayna kala yihii:
1Soomtu waa gaashaan qofka ka difaacda Naartawaa fadli aad u wayn qofka sooma ee soontiisa ilaaliyaa wuxuu helayaa difaac culus oo Naarta uu iskaga difaacay sidaasna waxaa inoo cadeeyey Xabiibkeena scw Xadiis qudsigii uu yidhi Alle swt; soomtu waa Gaashaan uu kaga gaashaanto qofka muslimka ahi naarta. Waxaa kale oo sugan in Rasuulkeenu yidhi SCW: qofka maalin Illaahhay dartii u sooma waxaa Naarta Illaahay ka fogeeyaa ama ka durkiyaa todobaatan dayrood in loo socdo oo kale, labada xadiis waxay inoo sheegayaa fadliga way nee ku jira Ramadaanta.
2 Soomtu waa dariiqa loo maro Jannadawuxuu yidhi Xabiibkeenu scw : Jannada waxaa ku yaala Albaab la yidhaaho Ar-rayaan dadka sooman oo qudha ayaa gala cid kale ma gasho marka kooda ugu danbeeyaa galo ayaa la soo xidhaa Albaabkaas,
3Soomtu qofka waxay ka dhufaantaa shahwaadka: qofka muslimka ah wuxuu ku jebiyaa damaca naftiisa soonta soontu waa dhufaan ayuu yidhi Rasuulkeenu scw maalin isagoo la hadlaya dhalin yarada wuxuu yidhi Rasuulkeenu scw: dhalin yarooy ninkii karaa ha guursado , kii aan karinina ha soomo waayo soomtu waa Dhufaanid, kelmada Dhufaan macneheedu waxaa la yaabaa in maanta dadka dhalin yarada ay ku adkaato waxaa weeye baahidii shahwadeed ee nafta qofka ayaa meesha ka baxaysa soomta ayaa jebinaysa.
4Soomtu waxay u shafeeco qaadaa Cidii soomtay: soomta iyo Quraanku labaduba way shafeeco qaadaan Qiyaamaha Soomtu waxay tidhaahaa: Raboow waxaan u diiday Shahwaadkiisii uu u baahnaa maalinta Ramadaan ee iga aqbal waan u shafeeco qaadayaa markasaa Illaah swt ka aqbalaa shafeecada.
5*Soomtu waa Denbi dhaaf iyo Kafaaro gud: Sida uu sheegay xabiibkeenu scw soonta waxaa lagaga dhaafaa qofka muslimka ah wixii ka dhac dhaca ee fitnada reerkiisa iyo maalkiisa iyo qaraabadiisa kaga yimaada.
6Soomtu waa farxad iyo Liibaan aakhiro iyo aduunba: wuxuu yidhi Rasuulkeenu scw : qofka soomaa wuxuu leeyahay laba farxadood mid waa marka uu afuro midna marka uu Illaahay la kulmo maalinta Qiyaame labadaas goorba wuu ku farxaa soomtiisa.
7Soomtu waa cibaado Ikhlaas ah & Sabir: wuxuu yidhi Alle swt xadiis qudsi: Soomta anigaa leh anigaana qofka ka abaal marinaya cuntada & cabitaan dartay buu aduunku uga tegay.
*Ducada qofka sooman lama soo celiyo: qofka sooman ducadiisa lama soo celiyo ee waa laga aqbalaa sidaas waxaa inoo cadeeyey Rasuulkeena scw .
8Soomta wax u dhigmaa ma jiraan: nin ayaa u yimi nebiga oo yidhi Nebi Allow ii sheeg camal aan ku mintido? Wuxuu yidhi: Soomta ogow wax u dhigmaa ma jiraane. Hadana maalin kale ayuu ku soo noqday su’aashii oo kale ayuu waydiiyey wuxuu markaasna ku yidhi: soomta ogow wax u dhigmaa ma jiraane.
dhamaan arimahaas aynu kor ku xusnay waxay inoo sheegayaan fadliga wayn ee Ramadaan leedahay, hadaba waa inaan ku dedaalnaa si aan ugu guulaysano derejooyinkaas waawayn iyo fadaa'ishaas Alle ha ina fahansiiyo hana inoo fududeeyo.
ka akhriso qaybaha Ramadaan oo dhan & qoraalo kale oo xiiso leh.